यसकारण गर्भवती महिलालाई ‘वाकवाकी’ लाग्छ,यस्तो छ घरेलु उपचार ! - Nawalpur Dainik
यसकारण गर्भवती महिलालाई ‘वाकवाकी’ लाग्छ,यस्तो छ घरेलु उपचार !
काठमाडौं । ग’र्भावस्थामा महिलाहरुलाई वा’कवाकी लाग्ने गर्दछ । यो हरेकजसो महिलाहरुमा देखिने गर्छ । यस्तो किन हुन्छ भन्ने धेरैलाइ थाहा नहुनसक्छ । ग’र्भावस्थामा महिलामा आउने एचसिजी ह’र्मोनका कारण वा’कवाकी र रिं’गटा लाग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।अध्ययन अनुसार, ग’र्भावस्थामा आउने यस्तो हर्मोनले निषेचित अन्डालाई पाठेघरको भित्तामा आएर बस्न सघाउँदछ । यसबाहेक स्ट्रे’स र थ’कानका कारण पनि यस्तो हुन सक्दछ ।
Prev५० रोग ठिक पार्ने अदभूत सागः जसले क्यान्सर देखि कपाल फुल्नेसम्म चट पार्छ
Nextदही सँग कहिलै खान नहुने यी चिज